NextMapping | Kediska Qadka
Mustaqbalka Shaqada Shaqada
Mustaqbalka shaqadu waa halkaan hada diyaar ma u tahay? Waxaan halkaan joognaa NextMapping focused waxaan diirada saareynaa wax walboo mustaqbalka oo kaa caawinaya inaad halkaas gaarto.
Inaad mustaqbalka aado waxay la micno tahay kala-beddelasho fikir ah oo ka wareegaya toosan una gudbaya dhinacyo badan.
Waxaa la joogaa waqtigii dib loo qiimeyn lahaa mustaqbalka loona abuuri lahaa qaabdhismeedka lagu aadayo halkaas. Qaado su'aalahan degdegga ah si aad u aragto halka aad ku sugan tahay marin-hayaha mustaqbalka. Sababtoo ah habka ugu wanaagsan ee mustaqbalka lagu tartami karo waa in la abuuro!
Shirkaddaadu ma waxay ku taal darafka ugu horeeya ee teknolojiyadda oo ay ka mid tahay guuritaanka daruuraha ee nidaamyada dhaxalka ama kobcinta daruuraha si kor loogu qaado awoodda ganacsi?
Fiiro gaar ah: Ujeedada mustaqbalku waa kor u qaadida daruuraha oo ay ka mid tahay nabadgelyada oo la wanaajiyey, xalalka daruuriga badan, u isticmaalista macaamiisha iyo kordhinta awooda shaqaalaha ee ah inay daruuriyaan (dariiqa: shirkada ganacsiga)
Miyaad haysataa maskax, qaab iyo geedi socod meel mustaqbal shaqo lagu diyaariyo?
Xusuusin: Si aad u abuurto mustaqbal aad u tiro badan waxaad ubaahantahay wadajirka dadka diiradda saaraya fakarka sidii mustaqballeyaal, bini aadammo, farsamo-yaqaanno iyo hal-abuurayaal (isha: SingularityU)
Miyaad martay heer cusub oo fikir xasaasi ah, kheyraad iyo taageero loo baahan yahay si loo maro mustaqbalka?
Fiiro gaar ah: Waxa halkan ina keenay ma nooga heli doonno (Marshall Goldsmith)
Miyaad beddelaysaa sida ay hogaamiyayaashu uga fekeraan mustaqbalka ganacsiga kor ilaa xagga sare?
Xusuusin: Hal abuurka khalkhalku wuu dhaawici karaa haddii aadan ahayn qofka khalkhal gelinaya (Clay Christensen)
Ma haysaa qorshe istiraatiiji ah oo kharibaya waxa adiga ku xiga adiga iyo shirkaddaadu?
Xusuusin: Tallaabada ugu horreysa ayaa ah in la caddeeyo in wax ay suurogal tahay markaa suurtagalnimada ayaa dhici doonta (Elon Musk)
Haddii aad MAYA kaga jawaabtay mid ka mid ah su'aalahan fursadda ay leedahay in lagula yeesho wadahadal nagala soo xiriira mustaqbalkaaga.
Fadlan nala soo xiriir si aad u sameysato wicitaan dhammaystiran oo ka hadlaya adiga iyo mustaqbalkaaga michelle@nextmapping.com.